Waa sidee xaalada dhaawac ee Angel Di Maria? – Gool FM
(America) 12 Juunyo 2016. Xulka Argentina ayaa daaha ka rogay in dhaawaca soo gaaray xiddigooda Angel Di Maria uusan u halis badnayn sida markii hore la mooday isla markaana ay suuro gal tahay inuu markale ka soo muuqdo inta uusan dhammaan Copa America oo ay u soo bexeen wareega sideed dhammaadka.
Di Maria ayaa dhaawac ka soo gaaray lugta midig ciyaartii jimcaha uu xulkiisa 5-0 uga adkaaday xulka Panama iyadoo garoonka laga saaray qeybtii hore.
Laakiin war uu soo saaray xiriirka dalka Argentina ayaa lagu sheegay in dhaawacu yahay barar yar.
Inkastoo la sheegin inta uu garoomada uga maqnaan doono dhaawacaas, Argentina ayaa sheegtay in howsha soo kabsashada ay bilaaban doonto durbadiiba, taa oo siineysa rajada inay suuro gal tahay ka soo muuqashadiisa kulamada kala baxa ee Copa America.
Di Maria ayaa gool dhaliyay kulankii furitaanka ay 2-1 uga adkaadeen xulka Chile balse markii dambe looma baahnaan oo waxaa dhaawac ka soo laabtay oo misane saddexleey ka kacay Lionel Messi oo badel ku soo galay ciyaartii dhaweyd ay shanta gool ku khaarijiyeen Panama.
EURO 2016: Poland oo guul ka gaaray Northern Ireland…( Arek Milik oo rikoodh sameeyay)+SAWIRRO